China Trace Moisture Analyzer ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang Instruments
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Potentiometric Titrator > အစိုဓာတ်ထိန်းကိရိယာကိုခြေရာခံပါ
Trace moisture analyzer device သည် potentiometric titration method ကို သုံး၍ volumetric analysis အတွက် high-precision electrochemical analysis tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် modular ဒီဇိုင်းကိုလက်ခံပြီး volumetric titration device, control device နှင့် testing device တို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည် acid-base titration, REDOX, မိုးရွာသွန်းမှုနှင့် complexation titration တို့ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ တူရိယာတွင် constant titration, micro titration, end-point setting titration, volume setting titration နှင့် mode titration တို့ပါ ၀ င်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များအတိုင်းကိုယ်ပိုင်အထူး titration နည်းလမ်းများတည်ဆောက်နိုင်သည်။
ဓာတ်ခွဲခန်းအစိုဓာတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုဓာတ်ခွဲခန်းမှယေဘုယျအခြေခံကိရိယာများတွင်အသုံးပြုသည်၊ အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်၊ အစားအစာ၊ ဆေးဝါးစစ်ဆေးခြင်း၊ ရောဂါထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ရေသန့်စင်ခြင်း၊ ရေနံ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ရေကြောင်း၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ သင်ကြားမှု၊ သိပ္ပံသုတေသနနှင့်အခြားဆက်စပ်သောနယ်ပယ်များ
1. အလိုအလျောက်နမူနာဆေးထိုးခြင်း၊ ပိုက်လိုင်းသန့်ရှင်းရေး၊ အလိုအလျောက်စမ်းသပ်ခြင်း၊
၂. ၈ လက်မအရောင် touch screen၊ လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူပြီး titration မျဉ်းကွေးနှင့်တိုင်းတာမှုရလဒ်များကိုပြသသည်။
၃။ အက်စစ်-ဘေ့စ်၊ REDOX၊ မိုးရွာသွန်းမှု၊ ရှုပ်ထွေးမှု၊
၄။ တင်သွင်းသော solenoid valve, PTFE corrosion-resistant burette, စွမ်းအားမြင့်သံလိုက်မွှေစက်၊
၅။ တိကျသော titration သေချာစေရန် High precision closed-loop control၊
၆.၀၀၃ မီလီမီတာအထိတိကျမြင့်မားသော burette၊
7. အစိုဓာတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို GLP GMP အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အညီလိုက်နာပါ။ တိုက်ရိုက် data print ထုတ်ခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်
လက်စွဲ High-precision Moisture Analyzer
Manual High-precision Moisture Analyzer သည်စျေးသက်သာသော Coulometric Karl Fischer အစိုဓာတ်ထိန်းစက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှဖြန့်ချိသည်။ နမူနာ၌အစိုဓာတ်နှင့်ဓာတ်ရောင်ခြည်ကိုဓာတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်နမူနာ၏အစိုဓာတ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်တူရိယာသည် Karl Fischer နိယာမကိုအသုံးပြုသည်။
အလိုအလျောက် High-precision Moisture Analyzer
အလိုအလျောက် High-precision Moisture Analyzer သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှဖြန့်ချိသော Coulometric Karl Fischer အစိုဓာတ်ထိန်းစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တရုတ်ပြည်မှကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သောအဆင့်မြင့် အစိုဓာတ်ထိန်းကိရိယာကိုခြေရာခံပါ ကိုစျေးသက်သက်သာသာဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင် TRAT, ISO9001, CE နှင့်အခြားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များပါ ၀ င်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်တရုတ်တွင်နာမည်ကျော် အစိုဓာတ်ထိန်းကိရိယာကိုခြေရာခံပါ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့အဆင့်မြင့်ပြီးအရည်အသွေးမြင့် အစိုဓာတ်ထိန်းကိရိယာကိုခြေရာခံပါ ကို ၀ ယ်ရန် ၀ မ်းသာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်ကုန်များ ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ဒီထက်ပိုသိချင်ရင်မင်းနဲ့ငါတို့ပူးပေါင်းဖို့မျှော်လင့်တယ်၊ မင်းအခုငါတို့တိုင်ပင်နိုင်တယ်၊ ငါတို့မင်းကိုအချိန်မီပြန်ပြောလိမ့်မယ်။